टिकटक वाली अन्तरबार्ता मै लफड़ा-दिदिले बिहे गर्दा बहिनी झुक्कीए पछि (भिडियो हेर्नुहोस)
भिडियो टिकटक वाली अन्तरबार्ता मै लफड़ा-दिदिले बिहे गर्दा बहिनी झुक्कीए पछि (भिडियो हेर्नुहोस)
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: भिडियो तल समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पुरा हेर्नुहोला । काठमाडौं,असोज । भारतका सेना प्रमुखले यही कात्तिक महिनामा नेपालको भ्रमण गर्न सक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले भारतका सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरभानेकोलाई नेपाल भ्रमणको लागि औपचारिक पत्र पठाउन लागेको जनाएको छ ।
उनले सो बिवादास्पद क्षेत्रलाई इंगित गर्दै नेपालले अरुको इसारामा लिपुलेकको मुद्दा उचालेको आरोप लगाएपछि नेपालको उच्चतहबाट नै उनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइएको थियो ।
त्यसपछि मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने प्रचलन नै रोक्न सरकारलाई जनस्तरबाट दवाब समेत परेको थियो । पछि नरभानेले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै नेपालप्रति नरम भाषा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका थिए । यद्धपि यसअघि २०७६ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नरभानेको भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको थियो ।
फेरी सियोनाकी ममी रु’दै मिडियामा, भगवान हाम्रो के गल्ति थियो ? (हेर्नुस् भिडियो)
बरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञा डा. सन्दीप श्रेष्ठ र नर्स एलिना गुरुङको १० महिने छोरी सियोना श्रेष्ठ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोगसँग ल’डि’रहेकी छन् ।
रातीको १२ बजे भाग्दा मसानघाट पुगियो, सानो जातको बिहे गर्यो भन्दै यस्तो गरे (हेर्नुस् भिडियो)
भिडियो समाचारको तल राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला! यो पनि पढ्नुस: नेपाल नर्सिङ परिषद्की रजिस्ट्रार बिन्दा घिमिरेविरुद्व हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गराएको छ।
समाचारको तल राखिएको छ भिडियो पुरा हेर्नुहोला! काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुकेको प्याजको मूल्य बढेको छ । बडा दशैं शुरु भए लगत्तै नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य बढेको हो ।